» रोज लामा दोस्रो स्थानमा, लगातार सफलता
रोज लामा दोस्रो स्थानमा, लगातार सफलता
२५ बैशाख २०७६, बुधबार १२:००
चन्द्र घलान,मकवानपुर, २५ बैशाख । मिस नेपाल २०१९ अन्तर्गत ‘मिस ब्युटिफुल हेयर’ को भोटिङमा रोज लामाले लगातार अघि बढ्दै दोस्रो स्थान कायम गरेकी छिन् । सातौँ स्थानबाट पाँचौँ हुँदै मंगलबारसम्ममा तेस्रो स्थानमा आएकी रोजले आज दोस्रो स्थान कायम गरेकी हुन् । मिस ब्युटिफुल हेयरका लागि अहिले लिभोन लाईफ एप मार्फत भोटिङ भईरहेको छ । बैशाख २५ गते बिहान ११ बजेसम्मको अपडेट अनुसार रोज लामाले १६.८२ प्रतिशत भोट ल्याउँदै तेस्रो स्थान ओगटेकी छिन् ।
काठमाडौँ जोरपाटीकी स्थायी निवासी रोज लामा २० वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । क्यालोफोर्नियामा बस्ने नेपालीहरुमाझ भएको मिस नेपाल क्यालेफोर्निया २०१७ की बिजेता समेत बनिसकेकी रोज लामाले ट्यालेन्ट राउण्डदेखि थप चर्चा पाउन थालेकी हुन् । त्यस्तै मिस नेपालमा गोल्ड स्टार मिस एथलेट अन्तर्गत भएको सटपुट प्रतियोगितामा रोजले तृतिय स्थान हासिल गरेपछि उनी थप चर्चामा छिन् ।
फुर्सदको समयमा अध्ययन गर्न, लेख्न तथा नयाँ नयाँ खोज गर्न मन पराउने उनले सफल इन्डष्ट्रीयल डिजाईनर र समाजसेवी बन्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । कन्स्ट्रक्टिभ टु डी र थ्री डि डिजाईन ड्रईङ गर्न पनि मनपराउने उनले इन्टीरियर डिजाईनिङ र स्टुडियो आर्ट विषयमा स्नातक गर्दै छिन् । मिस नेपाल अन्तर्गत नै भईरहेको मिस पपुलर च्वाईस जितेमा उनी सिधै फाईनलमा समेत पुग्ने छिन् । रोजसहित अन्य प्रतियोगिलाई मिस पपुलर च्वाईसमा बिप म्यासेञ्जरबाट भोट गर्ने तरिकाका बारेमा हामीले यस अघि नै भिडियो बनाएका छौँ । तपाईले त्यो भिडियो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनसक्नुहुनेछ ।
मिस ब्युटिफुल हेयरको पछिल्लो अपडेट अनुसार सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्दै काठमाडौँकी प्रदिप्ता अधिकारी ३ दिनदेखि अहिलेसम्मै पहिलो नम्बरमा छिन् । उनले यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा २२.५६ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । उनी मिस एथलेटकी विजेता समेत हुन् । त्यस्तै त्यस्तै सान्त्वना मालाकारलाई पछि पार्दै काठमाडौँकी रोज लामा १६.८२ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा छिन् । यसअघि दोस्रो स्थानमा भएकी काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार १५.६७ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा छिन् । काठमाडौँकी रिया बस्नेत ७.६४ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै चौथो नम्बरमा छिन् भने काठमाडौँकी अनुष्का श्रेष्ठ ७.७१ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै पाँचौँ स्थानमा छिन् । काठमाडौँकी निशा पाठक ४.५१ प्रतिशत भोट प्राप्त छैठौँ स्थानमा छिन् । भैरहवाकी शिवानी घिमिरे ४.९३ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै सातौँ स्थानमा छिन् । त्यस्तै काठमाडौँकी सोफिया भुजेल ४.८९ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै आठौँ स्थानमा, चितवनकी विपना सुवेदी ४.४४ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै नवौँ स्थानमा र काठमाडौँकी रक्षा उप्रेती २.०५ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै दशौँ स्थानमा छिन् ।
मिस ब्युटिफुल हेयरको भोटिङमा ललितपुरकी अस्मिता महर्जनले १.५३ प्रतिशत, काठमाडौँकी प्रथा अधिकारीले १.०३ प्रतिशत, पोखराकी सारा बजिमायाले ०.७५ प्रतिशत, भद्रपुरकी पुजा श्रेष्ठले ०.७ प्रतिशत र मोरङकी जेनिशा थपलियाले ०.७ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । त्यस्तै पोखराकी एलिशा जोशीले ०.६ प्रतिशत, ललितपुरकी नितिका कर्मचार्यले ०.५८ प्रतिशत, ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारीले ०.४१ प्रतिशत, काठमाडौँकी न्यान्सी बोगटीले ०.३२ प्रतिशत र काठमाडौँकी किरण थापाले ०.३१ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । त्यस्तै काठमाडौँकी जेन्नी महर्जनले ०.२८ प्रतिशत, भैरहवाकी सँस्कृति घिमिरेले ०.१८ प्रतिशत, भक्तपुरकी मिरा कक्षपतिले ०.१५ प्रतिशत र ललितपुरकी लक्ष्मी राउतले ०.१२ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । भोटिङ लिष्टको अन्तिममा ०.१२ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै झापाकी प्रकृति कट्वाल अन्तिम स्थानमा छिन् ।
लिभोनमा प्राप्त भोट र आयोजकको निर्णय अनुसार मिस ब्युटीफुल हेयर छनौट गरिने छ । हामी भोट गर्नेहरुले सुरुमा साईन अप अर्थात लग ईन गर्दा २० भोट दिन पाउने सुविधा दिईन्छ र हरेक दिन लग ईन गर्दा १० भोट दिने सुविधा दिईन्छ । एउटा मोबाईलबाट एउटा मात्र आईडी खुल्छ । तर यदि रिफर गर्दा साथीले पनि एप लग ईन गर्यो र तपाईको रिफर युजर नेम हाल्यो भने दुबैले थप २० भोट गर्न सक्नेछन् । मिस नेपालको २५ औँ सँस्करणको फाईनल मे ९ तारिखमा गरिँदै छ । लिभोन लाईफ एपबाट भोट गर्ने तरिकाका बारेमा हामीले यसअघि नै भिडियो बनाएका छौँ । कृपया सहयोगका लागि ति भिडियोहरु हेरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो सामाग्री कस्तो लाग्यो ? उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? अनि को बन्न सक्छिन् लिभोन मिस ब्युटिफुल हेयर ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।
अघि बढ्दै रोज लामा तेस्रो स्थानमा,अन्तिम पटक भोट गरौँ